Warshadda Kilinka Lime | Soo-saareyaasha Liin-shiinaha Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Golaha Khadadka Wax Soo Saarka Lime
Guudmarka Qaab dhismeedka wax soo saarka (1) Nidaamka miisaanka Dufcadaha (2) Qaadista iyo nidaamka quudinta (3) Nidaamka quudinta liinta (4) Nidaamka kalinta jirka ee kilinka (5) Nidaamka soo saarista Nuuradda (6) Nidaamka keydinta liinta (7) Nidaamka xakamaynta korantada (8) Nidaamka qalabka ilaalinta deegaanka Habka socodka Hoolka foornada waxaa lagu qalabeeyaa gubida gaaska iyo gubida dhuxusha. Waxay u isticmaali kartaa gaaska dabiiciga ah iyo gaaska sida shidaalka ama dhuxusha sida shidaalka. Markaad gaaska gubayso, qaado tusaale ahaan gaaska dabiiciga ee warshadaha ...
Dilaa Yuhuudda- 300 tan / maalintii X4 Lime oo lagu dubto Luoyang, mashruuca gobolka Henan-EPC
Magaca dhismaha ee mashruuca: Soosaarka Sannadlaha ah ee 300,000 tan oo ah mashruuc deegaanka u roon iyo tamar-badbaadinta liin-biyoodka Mashruuca Dhismaha: Magaalada Guigang, Gobolka Guangxi, Qeybta adeegga farsamada Shiinaha: Shirkadda dhirta ilaalinta deegaanka Yuhuudda “Waxaan u baahanahay buuro cagaaran iyo biyo nadiif ah iyo waliba buuro dahab iyo qalin ah waxaan ka jeclaan lahaa biyo nadiif ah iyo buuro cagaar badan buuraha dahabka iyo qalinka, biyaha saafiga ah iyo buuraha cagaaranna waa buur dahab iyo qalin ...
Wareejinta Suunka Dhagaxa
Gawaarida suunka, oo ah qalab guud oo loogu talagalay gaadiidka waara, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa wax soo saarka warshadaha waana mid ka mid ah qalabka gudbinta guud. Faa'iidada loo leeyahay isticmaalka daboolka suunka dhulka hoostiisa si loogu qaado mashiinka suunka ayaa ah inay si weyn u yareyneyso wasakhda wasakhda boodhka iyo buuqa, u hoggaansamaysa
Baaskiil Cache Dusha Kilinka
Jirku waa qaab afar geesle ah, gidaarka gudaha waxaa lagu siiyaa saxan baffle ah, dekedda banaan ayaa laga sameeyay inta udhaxeysa labada taargadood ee isku dhegan, dhamaadka hoose ee lakabka xiga ee saxanka baffle waxaa lagahelaa shaashad gariir ah.
Qaybiyaha Qaabka Stil
Aaladda kala qaybinta qaabka snailku waxay qaadataa tiknoolajiyada fidinta ee jiifka iyo tooska ah si ay ula qabsato xawaaraha wareega ee aaladda qaybinta iyo cabirka walxaha sida ku cad dhexroorka hoose ee kiliyaha.
Qaab dhismeedka weyn ee Kiln: qolofta jirka foornada ee qolofka birta, leben diidan oo la dhisay. Waxyaabaha loo yaqaan 'Kiln refractory' waa: lakab ah leben diidan bulukeeti casaan lakabka aluminium silicate ah ayaa dareemay caro
Juda Kiln-Cross qaybta hoose ee kiln
Waxqabadka sare ee qalabka (1) Soosaarka maalinlaha ah ee sarreeya (illaa 300 tan maalintii); (2) Waxqabadka sare ee badeecada (illaa 260 ~ 320 ml); (3) Heerka gubashada oo hooseysa (≤ 10 boqolkiiba;) (4) Kalsiyam oksaydh deggan (CaO≥90 boqolkiiba); (5) Hawlgal fudud iyo xakamaynta foornada (mashiin la'aan, leexasho la'aan, cascade la'aan, foorno la'aan, degsiin dheellitiran oo dhuxul ku jirta foornada); (6) Yaraynta qadarka lime ee ay isticmaashay alaabtu kadib markay adeegsatay shirkadu (30 boqolkiiba sameynta birta, baahinta iyo s ...
Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide,